Otu Pịa iTunes Lyric mbubata - Ozugbo Mbubata Lyrics ka iTunes
> Resource> iTunes> Otu Pịa Mbubata Multiple Lyrics ka iTunes
Ị chọrọ ịhụ lyrics mgbe na-ege ntị music? Gịnị banyere embed lyrics na music faịlụ nke mere na i nwere ike iri n'ebe ọ bụla? Ngwá ọrụ a ga-aka ime ha abụọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ pụkwara ịhụ ndị ọzọ ozi dị ka ọkụ egwu, aha, album nkà na ndị ọzọ. Mụtakwuo >>
Ihe ọ bụla ị na-Mac ma ọ bụ Windows, e nwere ọtụtụ lyrics metụtara ngwa (ma na-akwụ ụgwọ na free) ikuru na ngosi song lyrics. Ma, e nwere dị ole na ole ngwa ka mbubata lyrics ka iTunes na ogbe. Anyị na-achọgharị ndị internet na abụọ free iTunes lyrics mbubata na-anwale na-arụ ọrụ. Otu bụ maka Windows - iTunes Lyrics mbubata (iLyrics), ndị ọzọ bụ maka Mac - Get in-a me. Ma nwere mfe ma kensinammuo interface. Ọzọ iTunes na iPod Software >>
Get in-a me - iTunes Lyrics mbubata maka Mac
Nke a lyrics mbubata na-ekwu na akpaaka-magically tinye lyrics ka songs na iTunes. Ọ na-eme kpọmkwem dị ka otú ọ na-ẹkenam. Nanị site otu click, Get in-a me ibubata lyrics ka ugbu a na-akpọ song track na a nhọrọ nke otu ma ọ bụ karịa songs. Pịa anya button na-ele lyrics ke iche iche window. Get in-a me-enyekwa ọtụtụ hotkeys mezue aga-eme. Download iTunes Lyric mbubata
Nwalere Platform: Mac OS X 10.6 (Snow agụ owuru), iTunes 10.4 maka Mac.
Ọzọ iTunes na iPod Software >>
1. Na Ọrụ nkpado nhọrọ nyeere, a iTunes lyrics mbubata na-akpaghị aka weghachite lyrics online, ma agaghị overwrite lyrics ọ bụrụ na e ugbua dị.
2. Mgbe ibubata lyrics na ugbu a song, ma ọ bụ a nhọrọ nke 1 song, ẹdude lyrics na-dochie.
3. Mgbe ibubata lyrics ka a nhọrọ nke ihe karịrị 1 song, ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha nwere lyrics, Get in-a me jụrụ ma na-eji dochie ẹdude lyrics.
iLyrics - iTunes Lyrics mbubata maka Windows
E nwere ọtụtụ iTunes lyrics mbubata si gburugburu na-akpọ iLyrics, ma nke a iLyrics n'ezie na-arụ ọrụ. Abụọ ọdụ data na-gụnyere gị nhọrọ: LyricWiki ma ọ bụ Leo si Lryics. iLyrics achọ iTunes. Ya mere, mgbe ị na-emeghe a lyrics mbubata, iTunes ga-oru n'otu ma ọ bụrụ na iTunes anaghị emeghe. Wee họrọ song tracks ị chọrọ jupụta lyrics na iTunes na pịa Get Lyrics bọtịnụ na iLyrics. Ọ ga-ajụjụ ndị lyrics nkesa ma laghachi lyrics n'ihi na ị na-ekpebi update ma ọ bụ. Ọ bụrụ na "Melite akpaghị aka" nhọrọ na-enyocha, ị ga-ozi kpọtara lyrics na-enweta ya emelitere n'otu oge. Nke a bụ nnọọ adaba mbubata nza nke lyrics ka iTunes.
Get ọhụrụ version nke iLyrics (1.3) ebe a.
Nwalere Platform: Windows XP Professional, iTunes 10.4 maka Windows.